Trafikana bala : Zandary dimy nadoboka am-ponja -
AccueilSongandinaTrafikana bala : Zandary dimy nadoboka am-ponja
Vita tanteraka, ny alarobia lasa teo tokony ho tamin’ny 12 ora alina ny fanadihadiana lalina teo anatrehan’ny fampanoavana tao Ambositra mahakasika ny raharaha trafikana bala marobe nitranga tany an-toerana ny 17 febroary lasa teo. Rehefa nivoaka ny didy, dia fantatra fa fanadobohana am-ponja vonjimaika avy hatrany any an-toerana ihany, no niandry ireo zandary dimy isan’ny voarohirohy tao anatin’ity raharaha ity. Naharitra telo andro ny fihainoana azy ireo tao amin’ny tribonaly ao Ambositra, ary tsy vita izany raha tsy tamin’ny alin’ny alarobia. Raha ny fantatra, dia avy any Fenerive-Est ilay lohandohan’ny mpisorona tamin’izy ireo raha toa ka avy ao amin’ny sekolin’ny zandary ao amin’ity distrika ity, izay namoahana ireo bala, ireo ambiny. Ankoatra ireto farany, dia sivily miisa sivy ambin’ny folo hafa ihany koa no naiditra am-ponja vonjimaika, noho ny resaka famarotana sy fividianana ireo bala ireo niaraka tamin’ny basy maromaro izay niparitaka tao amin’ity faritra Amoron’i Mania ity. Sivy ambin’ny folo izy ireo tany am-boalohany, saingy rehefa nandeha ny fanadihadiana teo anatrehan’ny mpampanoa lalàna, dia niampy sivily dimy indray izany ka tafakatra efatra ambin’ny roapolo ireo voarohirohy sy naiditra am-ponja.
Araka ny nambaran’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena, dia fantatra fa tambazotra matanjaka amin’ny fanaovana trafika-na fitaovam-piadiana mihitsy izy efatra ambin’ny roapolo ireo, saingy samy manana ny anjara asany ao anatin’ilay fikambanana. Ireo zandary dimy ireo, izay mitantana ny fitaovam-piadiana ampiasain’ireo manam-pahefana eo anivon’ity vondron-kery ity izao ohatra, dia miandraikitra ny famoahana ireo bala marobe ireo ao anatin’ny magazay natokana hitehirizana izany. Ny sasany kosa, izay tsara homarihina fa nahitàna vehivavy, dia mivarotra izany amin’ireo dahalo sy ireo mpanera izay mbola mitady mpividy ireo entana indray avy eo. Noho ny hamaroan’izy ireo izay manao ity asa maloto ity, dia rariny raha nahazo laka ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana sy ny fanafihan-dahalo ao an-tampon-tanànan’Ambositra. Vokatr’ireo voalaza ireo mantsy, dia olona maro izay nahitana mpitandro filaminana no efa namoy ny ainy. Manoloana ny tranga tahaka izao ihany koa, dia tsy mitazam-potsiny ary tsy nisalasala ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena amin’ny famongorona ireo mpanao ratsy, izay fantatra fa isan’ny olana goavana tsy mampandroso ny firenena.
Baiko sy torolalana
Tamin’ny fotoana nandraisan’ny Jeneraly Randriamahavalisoa Girard ny fahefana amin’ny maha Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena azy, dia nametraka ary nanao vaindohan-draharaha ny fanadiovana anatiny, ny ady amin’ny kolikoly, ny famerenana ny fahatokisan’ny vahoaka ny tenany. Nanamafy izy fa tsy hilefitra amin’ireo zandary fanetriben’ny firenena sy tsy vonon-kiasa. Mba ahafahana manatanteraka izany, dia nisy ny baiko sy ny torolalana nomeny ireo mpitandro filaminana rehetra izay tarihiny amin’ny alalan’ny fidinana ifotony sy ny fihainoana mivantana ireo manam-pahefana sy ireo vahoaka, ahafahana manatsara ny fomba fiasa. Hatreto, dia tena nahomby izany, ary hita fa ankasitrahan’ireo olona izay hita ihany koa fa manampy betsaka ireo manam-pahefana amin’ny fitandroana ny filaminana.